नाराको अध्यक्षमा गंगाप्रसाद नेपाल विजयी – Clickmandu
नाराको अध्यक्षमा गंगाप्रसाद नेपाल विजयी
क्लिकमान्डु २०७६ भदौ २४ गते १९:२५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले नयाँ कार्यसमिति पाएको छ । नाराको अध्यक्षमा गंगाप्रसाद नेपाल विजयी भएका छन् । उनले ३७ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । सम्पन्न निर्वाचनमा उनका प्रतिद्वन्दी कमलप्रसाद ठकुरीले २५ मत ल्याएर पराजित भएका छन् ।
उपाध्यक्ष्मा नेपाल समुहका मेघ आलेले ३६ मत ल्याएर विजयी भए । उनका प्रतिद्दन्दि चुडामणी अर्यालले २६ मत पाएका थिए । महासचिवमा ठकुरी प्यानलका शिशिर खनाल विजयी भएका छन् । खनालले ३५ मत ल्याए भने उनका प्रतिद्वन्दी शिव अधिकारीले २७ मत पाएका छन् ।
सचिवमा इन्द्र बहादुर राईले ३२ मतका साथ विजयी भएका छन उनका प्रतिद्वन्दी राजु खड्काले ३० मत पाएका छन् । कोषाध्यक्षमा रिता अधिकारी ३७ मत ल्याएर विजयी भएकी छन् । सहकोषाध्यक्षमा नारायण श्रेष्ठ ३० मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा इन्दुदेवी वाग्ले ५४, राजेन्द्र थपलिया ४०, गोपाल राना ३८, मदन प्रसाद ढकाल ३४ मत पाएर विजयी भएका छन् ।
मलाइ जस्तो तनाव शत्रुलाई पनि नपरोस्, हल्ला मात्रै हो राजीनामा: डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
हिसाब गोलमाल गरेर सरकारले पुस महिनामा पुर्यायो राजस्वको लक्ष्य, २२ अर्ब ‘मिसम्याच’
डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पुनर्बहालीमा जे देखियो… भन्छन्- सत्यको जित भयो
अमेरिकन ब्राण्ड लिनियरफ्लक्सको आधिकारिक विक्रता बन्यो आईएमएस ग्रुप
नेपाली विद्यार्थीको समाचारमा इक्यानको चासो, अष्ट्रेलियाले भन्यो- त्यस्ता समाचारको समर्थन गर्दैनाैं
पर्यटन बोर्डको सीइओ छनोटमा राजनीति, उपसमिति सदस्य महराले दिए सचिवलाई चुनौती
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको महानिर्देशकमा गोपाल तिवारी नियुक्त
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको गण्डकी प्रदेश एजेन्ट् मीट कार्यक्रम सम्पन्न
किन गर्ने जीवन बीमा, के हुन्छ फाइदा ? सूर्या लाइफका सीइओ शिवनाथ पाण्डेको टिप्स
लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाको टिप्सः यो लगानी गर्ने समय हो (भिडियाेसहित)
लोकसेवाको परीक्षा कसरी पास गर्ने ? पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीको टिप्स
एउटै मान्छेको नम्बर धेरैपटक सेभ भएर तनाबमा हुनुहुन्छ? यसरी गर्नुहोस् मर्ज
स्वादिष्ट र स्वस्थकर मःम बनाउने किमा यसरी घरमै बनाउनुहोस् (भिडियोसहित)